हाम्रो भूमिमा विदेशी फौजको उपस्थिति अस्वीकार्य | eAdarsha.com
हाम्रो भूमिमा विदेशी फौजको उपस्थिति अस्वीकार्य
देश अहिले कठिन मोडबाट गुज्रदै छ । भोलि कहाँ के हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । राजनीतिक नेताहरु सिद्धान्तलाई भन्दा स्वार्थलाई बढी महत्व दिएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरु आपसमा मिल्न नसक्दा पूर्ण बहुमतको सरकार टिक्न सकेन । संसदमा कसैको पनि बहुमत नभएकोले गठबन्धनको सरकारले काम गरिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ । त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने उपाय सरकारसँग छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका छन् । उनले आर्थिक क्षेत्र सुधार्ने कुनै आशा गर्ने ठाउँ छैन । देश संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । एउटा सानो विवादले उग्ररुप लिन्छ । शंकै शंकाले लंका जलाउँछ भनेझैं भएको छ । अमेरिकाको एमसिसी विवादले नेपालीहरु नराम्ररी विभाजित भएका थिए । त्यो परियोजना संसदबाट पारित भएको छ । त्यसले एउटा समधान पाएको छ । अब फेरि अमेरिकाले सैन्य साझेदारीको अर्को प्रस्ताव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको समाचार आएको छ । अमेरिकाको त्यो प्रस्तावले तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट भविष्यमा अमेरिकाको भ्रमणको कार्यक्रम बन्नु अर्कोतिर सैन्य साझेदारीको प्रस्ताव बाहिर आउनुलाई नेपालीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा सम्झौताको मस्यौदाले नेपालीहरुलाई झस्काइ दिएको छ । सरकारले यसलाई सामान्य किसिमले लिन खोजेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले यसलाई मानवीय सहयोगका लागि बनेको कार्यक्रम भनेका छन् । तर यो सामान्य कार्यक्रम होइन र यसलाई सामान्य किसिमले लिनु हँुदैन । यसलाई सामान्य किसिमले लिनुहँुदैन । यस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी फौज नेपाल आउने जुन कुरा छ, त्यही नै सबभन्दा ठूलो आपत्ति हो यसलाई कुनै पनि नेपालीले स्वीकार्न सक्दैन ।
त्यस कार्यक्रमभित्र के के छन् ? त्यो हेर्न हामीले आवश्यक सम्झेनौं । अमेरिकी फौज नेपालमा बस्न आउने कुरा नै हाम्रा लागि त्याज्य विषय हो । विदेशी फौज आएर हाम्रो भूभागमा बस्दा त्यसको परिमाण के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट सिकिसकेका छौं । अब फेरि त्यस्तै इतिहास दोहो¥याउने दुस्प्रयास कसैले गर्नुहुँदैन । यसमा हामी सरकारलाई सजग र सतर्क पार्न चाहन्छौं । सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरु र गठबन्धन पार्टीका नेताहरुले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेमा त्यो अक्षम्य भूल हुनेछ । नेपाल शान्ति प्रिय देश हो । हामी स्वतन्त्र र तटस्थ बस्न चाहन्छौं । तानातानको जुन अभ्यास यहाँ हुन लागिरहेको छ । त्यो आपत्तिजनक छ । त्यो नेपालीलाई स्वीकार्य छैन । तानातानको त्यो बेलामा हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रियता देखाउनु पर्दछ यता पक्ष र उता पक्ष लागेर हाम्रो राष्ट्रियताको निर्वाह हुँदैन । हामी नेपाली हौं र नेपाली नै रहनु पर्दछ । त्यसैमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान निहित छ ।
बजेट अविलम्ब छलफलमा लैजाऊ
सम्पादक असार १७, २०७९
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ले प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रीहरुबीच विवाद…
अग्नि परीक्षामा वामदेव
सम्पादक असार १६, २०७९
देशका स्वार्थी पदलोलुप र एक अर्कासँग लामो समय मिलेर काम गर्न नसक्ने नेताहरुले गर्दा राजनीतिमा स्थिरता आउन नसकी देशको बिग्रदो…
बंगलादेशको राष्ट्रिय महत्वको पद्मा पुल
सम्पादक असार १५, २०७९
बंगलादेशले आफ्नो देशको राष्ट्रिय महत्वको ६ किलो मिटर पद्मा नदीको पुल आफ्नै स्रोत, साधन र प्राविधिकहरुद्वारा निर्माण गरेपछि त्यो पुल…
बजेटमाथिको छलफल सुरु गर
सम्पादक असार १३, २०७९
संवैधानिक प्रावधानअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले झण्डै ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत…
स्वदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने भेला
सम्पादक असार १२, २०७९
स्वदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न एडुफेयर भन्ने ब्यानरले धेरैको मनलाई आकर्षित गरेको छ । त्यसरी आकर्षित हुनेहरु काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित शैक्षिक…
सम्पादक असार १८, २०७९